नेपाली फिल्मका दर्शक हराए कि हराइयो ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनेपाली फिल्मका दर्शक हराए कि हराइयो ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट-आइतबार बिहानै अभिनेता दिपकराज गिरीले फेसबुकमा एउटा स्टाटस कोरे । उनले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले नेपाली फिल्मको बर्तमान अवस्था बोलेको थियो । दिपकले लेखे, दर्शक हराएको सूचना ।
दिपकले यो लेख्दै गर्दा उनको स्टाटसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खालका कमेन्ट आएका छन् । तर, यसले बहसको सिर्जना भने गरेको छ ।
के दिपकले भने जस्तै नेपाली फिल्मका दर्शक हराएका हुन् त ? या दर्शकलाई हराउनका लागि वाध्य बनाइयो ?
शुक्रबार रिलिज भएका सिनेमाको प्रचार बेतोड थियो । गोपी, रणवीर, र सय कडा दशले दर्शकलाई हलसम्म तान्छन् भन्ने विश्वास पनि गरिएको हो । तर, तिनै फिल्ममा दर्शक छैनन् । सिनेमाको समिक्षा आफ्नै तरिकाले आएको छ । तर, दिपकराज गिरीको स्टाटस यी तिन सिनेमालाई लक्षित छ ।
यो बर्ष रिलिज भएका सिनेमाको सूची हेर्ने हो भने लामो छ । तर, निर्माताले पैसा कमाएका सिनेमाको सूची हेर्ने हो भने दयनिय नै छ । सिनेमाको रिलिज सूची र नाफाको सूची हेर्ने हो भने नेपाली फिल्म किन बन्छन् जस्तो लाग्छ ।
छक्का पन्जा ३ ब्लकबस्टर, नाई नभन्नु ल ५ र जय भोले हिट, प्रसाद र इन्टु मिन्टु लण्डनमा औषत चल्नु बाहेक यो बर्ष रिलिज भएका कुनै पनि सिनेमाले निर्माता बचाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दर्शक हराएको सूचना आउनु स्वभाविक नै हो ।
तर, हामीले दर्शक हराएको सूचना भन्दै गर्दा दर्शक हराएकी दर्शकलाई हराउन वाध्य पारियो भन्ने बहस गर्न आवश्यक छ । एकपटक बर्षदिन भर बन्ने सिनेमालाई हेरौ । ति मध्ये दर्शकको ध्यान तान्न सफल सिनेमालाई हेरौ । अर्कोतिर, कलाकारको क्रेज पनि हेरौ ।
अहिले त कलाकार सिनेमामा भन्दा बढी टिकटकमा हिट छन् । अहिलेका सिनेमाको ट्रेलर र गीत युटुबमा हिट छन्, तर तीनले दर्शकलाई तान्न सकेका छैनन् । कहिलेकाही सिनेमा हेर्न जाने दर्शकलाई हामीले बनाएका सिनेमाले यसरी झुक्याएका छन् कि, फेरि ३ सय रुपैयाँ खर्च गर्न दर्शकले सय पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यी र यस्तै कारणले गर्दा नै हो, नेपाली सिनेमा हेर्न दर्शक हलसम्म जान सकेका छैनन् । राम्रा सिनेमाको मार्केटिङ ध्वस्त छ, दर्शकले सिनेमाको बारेमा थाहा नै पाएका छैनन् । नेपाली सिनेमा भनेपछि नाक खुम्च्याइदिने दर्शकहरुलाई ओहो भन्ने बनाउन सकेका छैनौ हामी ।
आँकडाले नै भन्छ, हाम्रो सिनेमा हेर्ने दर्शक ३ प्रतिशत छन् । तीनै दर्शकले बर्षमा सय वटा नेपाली सिनेमा घुमिफिरी हेरिदिन्छन् । ती एउटै दर्शक बर्षभरी नै सिनेमाका लागि लगानी गर्न सक्दैनन् । यसैले कुनैमा ३ त कुनैमा न्यून दर्शक हलसम्म आउँछन् ।
नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शक हराएका छैनन् । होइन भने छक्का पन्जाले १८ करोड कमाउने थिएन । तर, दर्शकलाई हलसम्म तान्न हामी असफल छौ । हामीले दर्शकलाई ढाटेका छौ, यही कारणले नै हो दर्शक हराएका ।
दर्शक हराएका होइनन्, हाम्रै कारणले गर्दा हराउन वाध्य भएका हुन् ।
kollywood gossip news
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- मिस नेपाल २०१२ मा सहभागी भएर सेकेन्ड रनरअप हुँदा सुवेक्षा खड्कालाई सिनेमाको अफर गर्ने कम थिएनन् । तर, स्टेजमा चलिरहेकी उनलाई सिनेमामा आइहाल्न मन थिएन । कारण थियो, कथावस्तु । किनकी, डेब्यू सिनेमाले […]